Tababar Loo Qabtay Qaar Kamid Ah Shirkadaha Deegaanka - Cakaara News
Tababar Loo Qabtay Qaar Kamid Ah Shirkadaha Deegaanka
Jigjiga(cakaaranews)Isniin 5ta, December 2016.Tababar uu soo agaasimay wakaalada horumarinta shirkadaha yaryar ee DDSI islamarkaana looqabtay qaar kamid ah shirkadaha heer deegaan kadhisan iyo waliba shirkadaha cusub, kana soo qaybgaleen xubno tiradoodu kor u dhaafayso 50 xubnood ayaa ka qabsoomay Hoolka tababarada ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Hadaba, furitaankii tababarkan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Maareeyaha Guud ee Wakaalada Horumarinta Shirkadaha Yaryar mudane Cabdi Muxumed Cismaan oo sheegay in tababarkani kusaabsanyahay nidaamka kaydsiga casriga ah iyo waliba maamulka iyo maaraynta ganacsiga shirkadaha. Wuxuuna intaa kudaray maareeyuhu in tababarkani yahay mid kor loogu qaadayo garaadka aqoomeed ee xubnaha kasocda shirkadaha. Isagoo tilmaamay in tababarkani qayb kayahay dadaalada loogu jiro tirtirida saboolnimada islamarkaana deegaanku ku higsanayo sidii bulshada deegaanku saboolnimada uga bixi lahayd loogana mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhaxaadka yahay.
Wuxuuna maareeyuhu kuladardaarmay kaqaybgalayaasha in inta uu tababarku socda sifiican looga faaiidaysto casharada labixinayo islamarkaana fahan buuxa ay kaqaataan casharada una sii gudbiyaan xubnaha kale ee nasiibka u helin tababarkan inay qaataan.
Ugudanabayna, waxaa iyana dhankoodaqar kamid ah xubnihii kasooqaybgalay tababarka oo sheegay in ay aad ugufaraxsanyihiin in looqabto tababar noocan ah oo aqoontooda kor loogu qaadayo. Iyagoo u mahadceliyay wakaalada Horumarinta shirkadaha yarayar dadaalka aan kala go’a lahayn ee ay lagarabtaagantahay kobcinta iyo horumarinta shirkadaha.